ထူးကွီးသား: Android Game
GOOGLE ဝငျလိုကျလို့ မိတျဆှေ လိုအပျတာလေး ရှာခဲ့ခြိနျ... ကြှနျတျော့ Blog မှာ တှခေဲ့ရငျ/ မိတျဆှေ ဆန်ဒ ပွညျ့ဝခဲ့ရငျ...ဘယျလိုဖွဈဖွဈ ကြှနျတျော တငျရတာ ကနြေပျပွီဗြာ...........
Fashion Story™ v 1.5.6.4(ဖကျရှငျဆိုငျဖှငျ့ကွမယျ)
မိနျးကလေးတှေ အကွိုကျတှေ့ မယျ့ ဖကျရှငျဆိုငျဖှငျ့ပွီး.... အဎတျအစား အလှပစစညျးတှေ ရောငျးရမယျ့ဂိမျး
ဖွဈပါတယျ....ဖျိုငျဆိုဒျ 1*Mb ဖွငျ့ ရယူကစား နိုငျပါတယျ.........
........ DOWNLOAD .......
ပို့ဈရေးသားသူ ဖိုးလူ အခြိနျ 1:27 AM
မနျနဂြောဂိမျး နှဈခွိုကျသူမြားအတှကျ.Total Football Manager (Online)
မနျနဂြောဂိမျး နှဈသကျသူတှအေတှကျ July.10.2014 မှာထှကျလာတဲ့ Total Football Manager v 1.2.1 ပါ
Top Eleven Manager ဆော့ကစားပုံနှငျ့ တျောတျော ဆငျတူပါတယျ...ဒီဂိမျးမှာတော့ ရုပျထှကျ အသှငျပွငျက T11 ထကျသာပါတယျ.... ဗားရှငျး 2.3 အထကျဆော့နိုငျပွီး ဖိုငျဆိုဒျ 46 Mb ရှိပါတယျ ....
.............. Playstore မှာရယူပါ
.............. Copy မှာရယူပါ
ပို့ဈရေးသားသူ ဖိုးလူ အခြိနျ 1:14 AM
FIFA 14 V1.3.6 FULL UNLOCKED For Android
FIFA 14 တောငျးထားသူတှအေတှကျ Unlocked full apk ကိုတငျပေးလိုကျပါတယျ....15.65Mb ပါ...
install လုပျပွီး data ဖိုငျကိုတော့ wifi နဲ့download ထပျဆှဲပေးလိုကျပါ ...ဆှဲပွီးသား ရှိရငျလညျး
SD > Android >Obb မှာ ထညျ့ပေးလိုကျရငျ ဆော့လို့ ရပါပွီ.........အဆငျပွပေါစေ..
FIFA 14 Full Unlocked Apk ကိုရယူရန်
ပို့ဈရေးသားသူ ဖိုးလူ အခြိနျ 10:39 PM
Plants vs. Zombies2v1.9. Unlimited Coins / MOD
ပန်းသရဲဂိမ်းဆိုတော့ မသိသူ မရှိလောက်ပါဘူးနော်...Coins တွေခိုးထားပြီးသားပါ..
-Apk ဖိုင်ကိုရယူပါ ( 6.85Mb )
- Data ဖိုင်ကိုရယူပါ ( 197.13 Mb )
နှစ်ခုလုံးဒေါင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ "com.ea.game.pvz2_na"ဆိုတဲ့data ဖိုင်ကို "Sdcard\_android\_data". မှာထည့်လိုက်ပါ..
ဆော့လို့ ရပါပြီ............................ အဆင်ပြေပါစေ................
ပို့ဈရေးသားသူ ဖိုးလူ အခြိနျ 1:50 AM
ကွမျးကွမျးရနျးရမျး ဆော့ကစားခငျြသူတှအေတှကျ DEAD TARGET (ရှနေဲ့ငှေ ခိုးပွီး)
သတ္တဝါဆန်းတွေနဲ့သဲထိတ်ရင်ဖို တိုက်ခိုက်ရမယ့်ဂိမ်းပါ...ဖိုင်ဆိုဒ် 108.41 Mb ရှိပါတယ်...
Unlimited Golds/Money ဆိုတော့ စိတ်ကြိုက်တိုက်နိုင်မှာပါ
Download >> APK + DATA . rar ဖိုင်ကိုရယူရန်
rar ဖိုင်ကိုဖြည် Apk ကို install > Data ဖိုင်ကို SD>android >obb ထည့်ပေးလိုက်ရင်ဆော့ကစားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ......
ပို့ဈရေးသားသူ ဖိုးလူ အခြိနျ 8:38 PM
HELLO HERO 6.1.5 Mod (Unlimited)
သူငယ်ချင်းတို့ အတွက် အကောင်လေးတွေနဲ့ ဆော့ကစားရမယ့် HELLO HERO ဂိမ်းလေးပါ....
11.13 Mb နဲ့ဒီနေရာမှာ ယူနိုင်တယ်နော်............ခိုးပြီးတဲ့ apk ပါ....install လုပ်၊ data ဖိုင်ထပ်ဆွဲပေးလိုက်ရင် ဆော့ လို့ ရပါပြီ....(တင်ပေးဖို့အဆင်မပြေလို့ ပါခဗျာ)
ပို့ဈရေးသားသူ ဖိုးလူ အခြိနျ 7:45 PM
Dream League Soccer 1.57 ( Gold Full)
ဘောလုံးဂိမ်းဆော့ရတာဝါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Dream League Soccer လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်....Token အပြည့် ပါလို့ကြိုက်တဲ့ ကစားသမား၊ ကွင်း အားလုံး စိတ်ကြိုက် ဝယ်ဆော့နိုင်တယ်နော်....ဖိုင်ဆိုဒ် 144Mb ရှိပြီး screen ကြီးတဲ့ဖုန်း၊ တက်ဘလက် တွေနဲ့ ဆော့ရင် အဆင်ပြေပါတယ်....
DOWNLOAD >> zippyshare မှ download ရယူပါ( rar )
-ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့rar ဖိုင်ကို ဖြည်ပါ
- apk ကို install လုပ်ပါ
- data ဖိုင်ကို SDcard> Android > Obb ထဲကိုထည့်ပြီးရင် ဆော့နိုင်ပါပြီ....
............................. အဆင်ပြေပါစေ ............................
ပို့ဈရေးသားသူ ဖိုးလူ အခြိနျ 6:36 AM
Clash of Clans( update v 6.186.3)
CoC ​ဆော့တဲ့သူငယ်​ချင်း​တွေအတွက်​ 2.7.2014 ထွက်​ update ​လေးတင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ playstore ၀င်​မရသူ​တွေ
PCloud မှ download ရယူနိုင်​ပါပြီ 49Mb ရှိပါတယ်​ .....
Post by Naymyo
ပို့ဈရေးသားသူ ဖိုးလူ အခြိနျ 9:00 AM
Subway Surfers 1.25.0 Sao Paulo (Unlimited Golds/Keys) For android
ဒီဂိမ်းလေးကတော့ အထူးပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး အားလုံးသိတဲ့ Subway Surfers လေးပါ...
သော့ နဲ့ရွှေ ခိုးပြီးသားလေးတင်ပေးထားလို့ကြိုက်မယ်ထင်ပါတယ်....
ဖိုဒ်ဆိုဒ် 33.95 Mb နဲ့ရယူ ကစားနိုင်ပါပြီ...
( ဒီနေရာမှာ ရယူနိုင်ပါတယ် )
လိုင်းမကောင်းလို့အဟောင်းလေးတွေပဲ ရှာတင်ပေးနိုင်သေးပါတယ်...
ပို့ဈရေးသားသူ ဖိုးလူ အခြိနျ 11:40 PM
Samurai II Vengeance 1.1 For Android ဆော့ချင်သူတွေအတွက်
ဖိုဒ်ဆိုဒ် 48.18Mb နဲ့ ကစားနိုင်ပါပြိ....
( ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းယူပါ )
ပို့ဈရေးသားသူ ဖိုးလူ အခြိနျ 11:28 PM
အကြံကုန်ဂဠုန် ဆားချက်တာမဟုတ်ပဲ အကြံကုန် အိုးဖုတ်ရောင်းတော့မယ်ဗျာ....
အိမ်လာလည်တဲ့ညီငယ်တစ်ယောက်ဖုန်းထဲမှာ ဆော့နေတာတွေ့ လို့ 
လည်ပတ်နေတဲ့ မြေအိုး အကြမ်းကို လက်ကလေးနဲ့ ထိပြီး ပုံဖေါ်ပေးရပါမယ်...ဒီဇိုင်းဆွဲ မီးဖုတ်ပြီးသွားရင်တော့ ပုံကို save / share ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ....ဖိုင်ဆိုဒ် 31.2 Mb ဖြင့် v 2.3 အထက်တွေမှာဆော့ ကစားနိုင်ပါတယ်...
Download >> pCloud မှာရယူပါ
ပို့ဈရေးသားသူ ဖိုးလူ အခြိနျ 9:11 PM
Gunship Battle3D( Unlimited Money & Gold)
Helicopter တစ်​စီးနဲ့ ရန်​သူစစ်​စခန်း​တွေကိုတိုက်​ခိုက်​ဖျက်​စီးရမယ့်​ offline game ပါ....
​ဆော့လို့​ကောင်းတယ်​ဆိုပြီး အကိုတစ်​​ယောက်​​ပေးလာလို့ ​ဆော့ကြည့်​လိုက်​တာ 3D ရုပ်​ထွက်​နဲ့​တော်​​တော်​​ဆော့​ကောင်းတာ​တွေ့ရတယ်​ဗျ....ဒါ​ပေမယ့်​ ဘယ်​လိုမှမနိုင်​ဘူး....
မနိုင်​ဘူးဆို​တော့ ထုံးစံအတိုင်း hack ဖို့ဖြစ်​လာပြီ...
ရှာလိုက်​ ​ဖွေလိုက်​​တော့ အဆင့်​သင့်​ ခိုးပြီးသားဖိုင်​​လေး​တွေ့လာတယ်​....ခုသူငယ်​ချင်း​တွေအတွက်​ ပြန်​တင်​​ပေးလိုက်​ပြီ..
​ဆော့ကြည့်​ပါ လုံးဝလန်းပါတယ်​ခဗျာ ဖိုင်​ဆိုဒ်​ 26.6 Mb ပါ.
သွင်းပြီးသားကို​တော့အရင်​ uninstall လုပ်​ပြီးမှထည့်​​ဆော့​နော်​...... အဆင်​​ပြေပါ​စေ
ပို့ဈရေးသားသူ ဖိုးလူ အခြိနျ 3:08 PM
TOP ELEVEN MANAGER v2.26
Topeleven ​ဆော့​နေတဲ့ မြန်​မာမန်​​နေဂျာများအတွက်​
10.6.2014 ထွက်​ v2.26 ကို ရယူနိုင်​ပါပြီ.......
.......... ဖလားများများ ရပါ​စေဗျာ ..........
ပို့ဈရေးသားသူ ဖိုးလူ အခြိနျ 8:02 AM
Battle Alert v4.3.3
CoC/Throne Rush ဂိမ်း​တွေနဲ့ဆင်​တူပါတယ်​....
ရွာတည်​ စစ်​သည်​​မွေး တိုက်​ခိုက်​ရသလိုပဲ အခု Battle Alert မှာ​တော့ ကိုယ့်​ရဲ့ စစ်​စခန်းကိုတည်​​ဆောက်​ပြီး
​ဆော့မယ်​ဆိုရင်​​တော့ 26.6mb နဲ့​အောက်​က link များမှာရယူနိုင်​ပါပြီ.....
Download >> Playstoreမှာရယူပါ
Download >> Mediafireမှာရယူပါ
Download >> Dropboxမှာရယူပါ
............ အဆင်​​ပြေပါ​စေ .............
ပို့ဈရေးသားသူ ဖိုးလူ အခြိနျ 11:32 AM
Glu Coins Editor v 3.0
Game ​ဆော့တဲ့သူငယ်​ချင်း​တွေအတွက်​ Coins ​တွေ hack နိုင်​မယ့်​ Tool ​လေးပါ...
သူက​တော့..Glu ကထုတ်​တဲ့ game ​တွေကိုပဲ Coins ခိုးယူနိုင်​ဖို့ပါ...ဖုန်းက​တော့ Root ရှိရပါမယ်​..
Hack နည်းကလည်းလွယ်​ပါတယ်​...glu ဂိမ်းတစ်​ခုဖုန်းထဲမှာထည့်​​ဆော့ထားပြီး....ဆိုရင်​..ခု apk ​လေးကို​ဒေါင်းပြီး install လုပ်​ပါ..ပြီးရင်​ဖွင့်​လိုက်​တဲ့အခါ အစိမ်း​ရောင်​အကွက်​​လေးနိုပ်​ပြီး...scan ဖတ်​​ပေးပါ.....ဖတ်​ပြီးရင်​​တော့ ​အောက်​ဘက်​ ​လေးကွက်​ထဲက မြားအ​ပေါ်ပြ​နေတဲ့အကွက်​ကိုနိုပ်​လိုက်​ပါ...ဖုန်းထဲမှာ ကိုယ်​ထည့်​ထားတဲ့ Glu game ​တွေ​တွေ့ရင်​ ၀င်​ပြီး​ဆော့ကြည့်​​ပေ​တော့ဗျာ....Glu coins ​တွေ​ရောက်​​နေပါပြီ......​သြော်​....​မေ့လို့...နက်​ချိတ်​ဆက်​မှု့​လေး​တော့ပိတ်​ထားရမယ်​​နော်​.....ကဲ ဆိုဒ်​ 1Mb သာသာမို့ အမြန်​ယူထားလိုက်​​တော့......Glu game​တွေမသိတဲ့သူ တချို့ရှိမှာစိုးလို့....game logo ​အောက်​​ဘေးမှာ ကာတွန်း​ခေါင်းပုံ​လေးနဲ့..
>FRONTLINE COMMANDO 2
>DEER HUNTER 2014
>BLOOD & GLORY
>CONTRACT KILLER 2
>SAMURAI vs ZOMBIES
>GUNBROUS2နဲ့ အခြားများစွာရှိပါတယ်​...
DOWNLOAD >> Boxမှရယူရန်​
Post by NayMyo NMM
ပို့ဈရေးသားသူ ဖိုးလူ အခြိနျ 4:19 PM
Mental Hospital: Eastern Bloc2v1.0 Apk (150Mb)
ပို့ဈရေးသားသူ ဖိုးလူ အခြိနျ 4:42 AM
စုံ​ထောက်​ ဦးစံရှားအဖြစ်​သရုပ်​​ဆောင်​ပြီးဂိမ်း​ဆော့ချင်​သူအတွက်​....သဲလွန်​စ ရှာ​ဖွေ၊အမှု့့လိုက်​ရမယ့်​ CSI ဂိမ်းပါ...
Download > 4Share
ပို့ဈရေးသားသူ ဖိုးလူ အခြိနျ 8:35 AM
Clash of Clans Update v6.108.2(16.May.14)
Clash of Clans နှစ်သက်တဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက် ဒီနေ့ ထွက် update လေးပါ......OS 4.0.3 အထက်ဆော့နိုင်ပါတယ်...
ပို့ဈရေးသားသူ ဖိုးလူ အခြိနျ 8:30 PM
Manager ဂိမ်းကြိုက်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေနှစ်သက်မယ့် ကိုရီးယားထုတ် onlinegame ပါ....2D/3D ရုပ်ထွက်ပြောင်းလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်...အသင်းကစားသမား/ကစားကွက်တွေကိုကန်နေတဲ့ပွဲကို..ကြည့်ရှု့ပြီး ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါမယ်.......ဆိုဒ်က 31.8Mb ရှိကာ data မလိုပါဘူး...
ပို့ဈရေးသားသူ ဖိုးလူ အခြိနျ 1:55 AM
Champ Man 2014(ပိုကျပိုကျအပွညျ့)
မန်နေဂျာဂိမ်းနှစ်သက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ပိုက်ပိုက်ခိုးပြီးသားလေး.....အဆင်သင့်ဆော့ရအောင်တင်ပေးလိုက်
ပါတယ်....၂၀၁၃.၂၀၁၄ ကစားသမားအားလုံး update ဖြစ်ပြီးသားပါ...
26Mb ရှိပါတယ်.....အောက်က လင့်မှာရယူပါ........
Download >> BOX / datafilehost
ပို့ဈရေးသားသူ ဖိုးလူ အခြိနျ 12:37 AM
Android App -01 (101)
Android App -02 (14)
Android Browser Apps (7)
Android Firmware (1)
Android Game (38)
Android Keyboard မြား (4)
Android Security Apps (21)
Android Tools (13)
Android USB driver မြား (1)
Android Village Apk (1)
Root ဆော့ဝဲလျမြား (13)
Root ပွုလုပျနညျးမြား (5)
Website လမျးညှနျ (5)
ဖတျစရာ မှတျစရာ (26)
မွနျမာ စာတနျးထိုး ဇာတျကားမြား (1)
သနျ့ရှငျးရေး ဆော့ဝဲလျမြား (15)
အလှဆငျ APP မြား (46)
Photoshop Cs4 အခွခေံလကေ့ငျြ့နညျးစနဈမြား
နှမျဂြာသိုငျး - ဒေါငျးယဉျပြံဘုံနံဘေးမှာ စာရေးလို့ထ...
Blog မှာတငျသမြှ FB မှာဖတျနိုငျဖို့ Like လေးတဈခကျြနိုပျပေးပါ
Future For SmartPhones Group
Sony, Samsung & Other Technology
မိတျဆှရေဲ့ IP လိပျစာ
ရှမျးပွညျနယျအရှပေို့ငျး သတငျးapk 2.30Mb (zawgyi)
ကျိုင်းတုံ ၊ တာချီလိတ် ဒေသ ဖွံဖြိုးမှု့လုပ်ဆောင်ချက်များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ တင်ဆက်ပေးနေသော သတင်း apk ဖိုင်လေးပါ.. မိမိတို့ Android ...
Screen ပျေါမှာ နာရီ widget လှလှလေးတှသေုံးရအောငျ
Clockwidget လှလှလေးတွေ ရမယ်နော်... ဖုန်း screen ပေါ်မှာ နာရီဆန်းဆန်းလေးသုံးတတ်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်...ဒီ Apk လေးကို install လုပ်လိုက်....
လိုအပျတဲ့ fb ဗားရှငျးလေးတှေ အလှယျပွနျယူသုံးနိုငျအောငျ စုစညျးထားပါတယျ... ၁။ Facebook v 3.5 ကိုရယူရန် ၂။ Facebook v 3.9 ကိုရယူရန် ၃။ Fa...
Sex Tube Pro v1.52 (+18) 399Kb (ကျားသီးသန့် )
......... အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူများအတွက် ....... ကဲတင်ပေးလိုက်ပြီနော် ....တောင်းထားတဲ့ ဘော်ဒါတွေကျေနပ်နိုင်မှာပါ. အပြည့်အဝပါတဲ့အတွက်...
MRTV-MRTV4နှငျ့Thai TRUE TV channel , Radio တို့ကို ကွညျ့ရှု့နားဆငျကွမယျ...
MRTV , MRTV-4 နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီး TRUE ရုပ်သံလိုင်းများ ပါဝင်တယ်...လိုင်းအသင့်တင့်ဖြင့်ကြည့်ရူ့ နိုင်ပြီး မြန်မာ Menu ထည့်သ...
လာလညျတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးအထူးတငျပါတယျ သူငယျခငျြး. Picture Window theme. Theme images by IntergalacticDesignStudio. Powered by Blogger.